परमेश्वरको सेवा गर्नु नै उनको ओखती हो | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इन्डोनिसियन इलोको इसोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कम्बोडियन काजाक किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोंगो कोरियन क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटोंगा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टिभ टेटन डिली डच डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन भियतनामिज भेन्डा मले माया मालागासी माल्टिज म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) सामोअन सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
परमेश्वरको सेवा गर्नु नै उनको ओखती हो
केन्यामा दुई अग्रगामी भाइलाई एक जना घरधनीले भित्रै बोलाए। घरभित्र पस्दा एउटा फुच्चे मान्छे ओछ्यानमा पल्टिरहेको देखेर तिनीहरू दङ्ग परे। उक्त घरधनीको आङ सानो थियो र हातहरू पनि ज्यादै छोटा थिए। अग्रगामी भाइहरूले “लङ्गडा मृगझैं उफ्रनेछ” भन्ने परमेश्वरको प्रतिज्ञा सुनाउँदा उनी एकदमै खुसी भए।—यशै. ३५:६.
उक्त घरधनीको नाम ओन्सेमस रहेछ। उनलाई हड्डीसम्बन्धी गम्भीर रोग * लागेको रहेछ भनेर अग्रगामीहरूले थाह पाए। उनका हड्डी एकदमै कमजोर थिए। सजिलै भाँचिने। त्यस रोगको उपचारै नभएकोले ओन्सेमसले जीवनभर दुःख खप्नुपर्थ्यो र उनको जीवन ह्वीलचेयरमै बित्ने थियो।
ओन्सेमस बाइबल अध्ययन गर्न राजी भए। तर उनलाई आमाले सभा जान दिइनन्‌। छोरा सभा गयो भने उसलाई चोटपटक लाग्ला, झनै पीडा होला भन्ने पीर तिनलाई लागेको थियो। त्यसकारण भाइहरूले सभाको कार्यक्रम रेकर्ड गरेर ओन्सेमसलाई दिन्थे र उनी घरैमा बसेर कार्यक्रम सुन्थे। तर अध्ययन गरेको पाँच महिनापछि ओन्सेमसले जेसुकै भए पनि सभा जाने निर्णय गरे।
ख्रीष्टियन सभाहरूमा जान थालेपछि ओन्सेमसलाई झनै पीडा भयो कि? अहँ, भएन। उनी यसो भन्छन्‌: “सभामा बस्दा पीडा कम भएको जस्तो लाग्थ्यो।” सिकिरहेको कुराले दिएको आशाले गर्दा उनलाई सन्चो महसुस हुन्थ्यो। छोराको अनुहार उज्यालो हुन थालेको देखेर ओन्सेमसकी आमा एकदमै खुसी भइन्‌ र तिनले पनि अध्ययन गर्न थालिन्‌। तिनी भन्थिन्‌: “परमेश्वरको सेवा गर्नु नै मेरो छोराको ओखती हो।”
ओन्सेमसलाई बप्तिस्मा अप्राप्त प्रकाशक हुन धेरै समय लागेन। पछि उनले बप्तिस्मा पनि गरे। अहिले उनी सहायक सेवकको रूपमा सेवा गर्दै छन्‌। दुवै खुट्टा र एउटा हात नचल्ने भए पनि उनी यहोवाको सेवामा सकेजति गर्न चाहन्थे। उनी सहायक अग्रगामी सेवा गर्न चाहन्थे तर अलि हिचकिचाइरहेका थिए। किन? ह्वीलचेयर गुडाइदिन हरबखत अरूको मुख ताक्नुपर्ने भएकोले। सङ्गी ख्रीष्टियनहरूलाई आफ्नो चिन्ता पोखाउँदा तिनीहरूले मदत गर्ने वचन दिए। त्यसैकारण ओन्सेमसले सहायक अग्रगामी सेवा गर्न सके।
नियमित अग्रगामी सेवा गर्न चाहे तापनि ओन्सेमसलाई पुरानै चिन्ताले सतायो। तर एक दिन दैनिक पदबाट उनले प्रोत्साहन पाए। उक्त पद भजन ३४:८ थियो। त्यहाँ यस्तो लेखिएको छ: “पारख गरेर हेर, कि परमप्रभु कस्तो भलो हुनुहुन्छ।” उक्त पदबारे मनन गरेपछि ओन्सेमसले नियमित अग्रगामी सेवा गर्ने निर्णय गरे। उनी अहिले हप्ताको चार दिन प्रचारमा जान्छन्‌ र उनका प्रगतिशील बाइबल विद्यार्थी थुप्रै छन्‌। सन्‌ २०१० मा उनले अग्रगामी सेवा स्कूलमा भाग लिए। पहिलो चोटि भेटेका भाइहरूमध्ये एक जनालाई प्रशिक्षकको रूपमा पाउँदा ओन्सेमस औधी खुसी भए।
ओन्सेमस अहिले ४० वर्ष पुग्नै लागेका छन्‌। उनका आमाबुबा बितिसके पनि मण्डलीका भाइबहिनीले उनको हेरविचार गर्छन्‌। आफूले पाएका सम्पूर्ण आशिष्‌को लागि उनी कृतज्ञ छन्‌ र “म बिरामी परें” भन्नै नपर्ने दिन पर्खिरहेका छन्‌।—यशै. ३३:२४.
^ अनु.3Osteogenesis Imperfecta
शेयर गर्ने शेयर गर्ने परमेश्वरको सेवा गर्नु नै उनको ओखती हो
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण नोभेम्बर २०१३
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण नोभेम्बर २०१३